2021 को लागी9स्मार्ट घर प्रवृत्तिहरु
कल्पना गर्नुहोस् तपाइँ अफिस मा एक लामो दिन भएको छ। तपाइँ सबै दिन टाढा पीसिएको छ र अब तपाइँ के गर्न चाहानुहुन्छ घर र चिसो पाउनुहुन्छ।
तपाइँ तपाइँको स्मार्ट घर एप खोल्नुहुन्छ, भन्नुहोस् "एलेक्सा, म एक लामो दिन भएको छु", र तपाइँको स्मार्ट घर बाकी को ख्याल राख्छ। यो preheat गर्न को लागी तपाइँको ओवन र एक पुरानो Chenin ब्लान्क ठंडा गर्न को लागी सेट गर्दछ। तपाइँको स्मार्ट स्नान तपाइँको सही गहिराई र तापमान मा भरिन्छ। नरम मूड प्रकाश कोठा र परिवेश संगीत हावा भरिन्छ।
कार्यालय मा एक खराब दिन पछि, तपाइँको स्मार्ट घर पर्खाइमा छ - दिन बचाउन को लागी तयार छ।
विज्ञान कथा? हैन। आज को स्मार्ट घर मा स्वागत छ।
स्मार्ट घर आविष्कारहरु सानो कदम बाट एक विशाल छलांग को लागी गएका छन्। २०२१ ले खेल मा धेरै प्रमुख प्रवृत्तिहरु ल्याउनेछ, प्रवृत्तिहरु कि हामी के 'घर' को धेरै अवधारणा परिवर्तन गर्न को लागी सेट गरीएको छ।
2021 को लागी स्मार्ट घर प्रवृत्तिहरु
घरहरु जुन सिक्छन्
शब्द 'स्मार्ट घर' को लागी केहि समय को लागी चारै तिर भएको छ। धेरै लामो समय पहिले, थर्मोस्टेट खोल्नु र रिमोट कन्ट्रोल संग पर्दा आकर्षित गर्न सक्षम हुनु 'स्मार्ट' स्थिति कमाउन को लागी पर्याप्त थियो। तर २०२१ मा, टेक सफलताहरु यो सुनिश्चित गर्न जाँदैछन् कि स्मार्ट घरहरु साँच्चै स्मार्ट छन्।
यसको सट्टामा मात्र आदेशहरु को प्रतिक्रिया र के हामी यो गर्न को लागी भन्न को लागी, स्मार्ट घरहरु अब भविष्यवाणी र हाम्रो प्राथमिकताहरु र व्यवहार को ढाँचाहरु को आधार मा अनुकूलन गर्न सक्छन्।
मेशिन शिक्षा र उन्नत आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सले यो बनाउनेछ त्यसैले तपाइँको घर लाई थाहा हुनेछ कि तपाइँ एक वा दुई डिग्री हीटिंग लाई बदल्न चाहानुहुन्छ यो भन्दा पहिले तपाइँ यो महसुस गर्नुहुनेछ। यो भविष्यवाणी गर्न को लागी सक्षम हुनुहुनेछ जब तपाइँ एक निश्चित खाना बाट बाहिर चल्नुहुनेछ, मात्र तपाइँको खाने बानीहरुमा आधारित। यो पनी तपाइँ तपाइँको घर को जीवन मा सुधार गर्न को लागी सुझावहरु को पेशकश गर्न सक्षम हुनुहुनेछ, अनुकूलित नुस्खा विचारहरु र मनोरन्जन सुझावहरु र कसरत दिनचर्या को लागी स्वास्थ्य सल्लाह बाट। यो कसरी स्मार्ट को लागी हो?
एउटा क्षेत्र जहाँ स्मार्ट घरहरु साँच्चै कर्षण प्राप्त गरीरहेका छन् रसोईघर मा छ। त्यहाँ दैनिक खाना सुधार गर्न को लागी टेक को लागी धेरै संभावनाहरु छन्, खाना भण्डारण को सादगी र अर्को स्तर मा तयारी को लागी।
फ्रिज संग शुरू गरौं। १99 In मा, अल्बर्ट टी मार्शल पहिलो फ्रिज आविष्कार, मौलिक खाना संग हाम्रो सम्बन्ध परिवर्तन। १११ बर्ष पछि, फ्रिजले मात्र खाना ताजा राख्दैन। उनीहरु एक पारिवारिक केन्द्र को रूप मा कार्य गर्दछन् - तपाइँको खाना को योजना बनाएर, तपाइँले पाउनुभएको खाना मा ट्याबहरु राख्दै, समाप्ति मितिहरु को ट्रयाक राख्दै, तपाइँको किराना सामान को आदेश जब तपाइँ कम चलिरहनुभएको छ, र क्यालेन्डर र नोटहरु संग जोडिएको पारिवारिक जीवन राख्दै। कसलाई फ्रिज म्याग्नेट चाहिन्छ जब तपाइँ यी मध्ये एक पाउनुभयो?
स्मार्ट फ्रिज सँगै तपाइँको सबै अन्य उपकरणहरु सिcs्क। यी स्मार्ट ओभन कि सटीक तापमान खाना को विभिन्न प्रकार पकाउन जान्दछन्। स्मार्ट ओभन पनि doneness को स्तर समायोजित गर्न सक्नुहुन्छ परिवार को सदस्य को लागी यो पकाउने को लागी निर्भर गर्दछ। तपाइँ टाढा टाढा आफ्नो ओवन preheat गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसैले यो रोल गर्न को लागी तयार छ जब तपाइँ घर जानुहुन्छ। हूवर, बोश, सामसु,, र सीमेन्स सबै अर्को बर्ष सीमा-पुशिंग स्मार्ट ओवन जारी गर्दैछन्।
स्मार्ट वाइन कूलर, माइक्रोवेभ, मिक्सर, र प्रेशर कुकर पनि टाढाबाट नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, त्यसैले तपाइँ सबै खानाको साथ घर आउन सक्नुहुन्छ तर सेवा। भान्साको मनोरन्जन केन्द्रहरु लाई नबिर्सनुहोस्, जहाँ तपाइँ तपाइँको मनपर्ने धुनहरु सुन्न सक्नुहुन्छ वा भिडियो खाना पकाउने बेला तपाइँको सबैभन्दा राम्रो साथी लाई कल गर्न को लागी, वा यहाँ सम्म कि व्यञ्जनहरु को पालन गर्न सक्नुहुन्छ।
स्मार्ट रसोईघर अब पुरा तरिकाले एकीकृत क्षेत्रहरु छन् जहाँ अविश्वसनीय टेक्नोलोजी सरल डिजाइन, तपाइँ अर्को स्तर को रचनात्मक प्राप्त गर्न को लागी प्रेरित गरीरहेका छन्।
अर्को स्तर सुरक्षा
सम्झनुहोस् ती "भविष्यका घरहरु" दिन मा पछाडि बाट। उनीहरुसँग २४ घण्टाको घर निगरानी हुन्छ, तर तपाइँ टेप भण्डारण गर्न एउटा पूरै कोठा चाहिन्छ। अर्को बर्षको सुरक्षा प्रणाली क्लाउड भण्डारणमा जोडिएको छ, अनन्त भण्डारण र सजिलो पहुँचको साथ। स्मार्ट तालाहरु पनि विकसित हुँदै छन् - फिंगरप्रिन्ट र अनुहार पहिचान टेक्नोलोजी तिर बढ्दै।
सायद स्मार्ट घर सुरक्षा मा सबैभन्दा ठूलो विकास ड्रोन हो। ड्रोन क्यामहरु सायद एक विज्ञान फाई शो बाट सीधा केहि झिकेको जस्तो लाग्न सक्छ, तर उनीहरु चाँडै नै संसार भर मा घरहरु गस्ती हुनेछन्। अमेजन २०२१ मा एक नयाँ सुरक्षा उपकरण छोड्ने छ जुन स्मार्ट घर सुरक्षा मा सीमाहरु लाई धकेल्दै छ।
तिनीहरूको नयाँ सुरक्षा ड्रोन सम्पत्ती वरपर धेरै सेन्सरहरु लाई जोड्नेछ। यो डक रहन्छ जब प्रयोग मा छैन, तर जब एक सेन्सर ट्रिगर हुन्छ, ड्रोन क्षेत्र को लागी उड्छ अन्वेषण गर्न को लागी, सबै समय फिलिम।
कार सुरक्षा धेरै परिवर्तन गरीरहेको छ, धेरै उपकरणहरु को परिचय को साथमा जुन तपाइँको कार संग जोडिएको छ। अमेजन को रिंग ड्राइभिंग सीट मा छ जब यो कारहरु को लागी स्मार्ट सुरक्षा को लागी आउँछ, विशेष गरी उनीहरुको अभिनव कार अलार्म संग। जब कसैले छेड्ने वा तपाइँको कार मा तोड्ने कोसिस गर्दछ, यन्त्र तपाइँको फोन मा एक एप को लागी अलर्ट पठाउँछ। छिमेकीहरु लाई जगाउन को लागी - केवल एक सीधा सुरक्षा चेतावनी।
स्मार्ट प्रकाश अविश्वसनीय रूप मा उन्नत हुँदैछ। फिलिप्स, Sengled, Eufy, र Wyze सहित ब्रान्डहरु गुच्छा को उज्यालो हो, बाकी को लागी बाटो को लागी प्रकाश को लागी।
स्मार्ट बल्ब अब तपाइँको फोन, ट्याब्लेट वा smartwatch द्वारा नियन्त्रण गर्न सकिन्छ र यो पनि आवाज आदेशहरु को माध्यम बाट सक्रिय गर्न सकिन्छ। तपाइँ पनी टाढा बाट मूड सेट गर्न सक्नुहुन्छ, तपाइँको बत्तीहरु लाई सक्रिय गर्न को लागी जब तपाइँ घर जाँदै हुनुहुन्छ। धेरै स्मार्ट बल्बहरु पनि geofencing सुविधाहरु छन्, जसको मतलब उनीहरु जीपीएस को उपयोग गर्न को लागी तपाइँको स्थान सpoint्केत गर्दछ। यी स्मार्ट रोशनी सक्रिय गर्न को आवश्यकता छैन - ती स्वचालित रूप मा जब तपाइँ तपाइँको यात्रा घर मा एक विशिष्ट बिन्दु मा हुनुहुन्छ।
तपाइँ पनि विशिष्ट अवसरहरु को एक किसिम को लागी तपाइँको प्रकाश लाई अनुकूलित गर्न सक्नुहुन्छ। मूड प्रकाश को विभिन्न प्रकार लाई तपाइँको मनपर्ने टिभी शो सम्म सिnced्क गर्न सकिन्छ, स्वचालित रूप बाट एक विशेष रूप देखि डिजाइन प्रकाश ट्र्याक बनाउन को लागी अडियो संकेतहरु को पता लगाउन।
स्मार्ट घर को कुनै पनि तत्व संग, एकीकरण कुञ्जी हो। यही कारणले यो स्मार्ट प्रकाश छ कि तपाइँको स्मार्ट सुरक्षा र स्मार्ट हीटिंग सिस्टम संग सिcs्क गर्न को लागी अर्थ बनाउँछ। २०२१ स्मार्ट प्रकाश देख्नेछ कि 'यदि यो तब त्यो' मिल्दो छ - यसको मतलब यो अभूतपूर्व तरीका बाट बाह्य वातावरण मा परिवर्तन को लागी प्रतिक्रिया गर्न सक्छ। यदि, उदाहरण को लागी, मौसम पूर्वानुमान एक उदास, सूर्यरहित ढिलो दिउँसो भविष्यवाणी गर्दछ, तपाइँ एक राम्रो जलाइएको, स्वागत घर, तपाइँको बुद्धिमान प्रकाश प्रणाली को सौजन्य बाट घर पुग्न को लागी आशा गर्न सक्नुहुन्छ।
भर्चुअल सहायक एकीकरण
महामारीको कारण मानिसहरु घर मा अधिक समय बिताउन को लागी, एआई भर्चुअल सहायकहरु हाम्रो दैनिक जीवन को एक ठूलो हिस्सा बन्दै छन्। केहि बर्ष पहिले, उनीहरुको भूमिका Spotify मा अर्को गीत छान्ने सम्म सीमित थियो। चाँडै, उनीहरु स्मार्ट घर को हरेक पक्ष संग सिंक गरिनेछ।
फ्रिज मा खाना के हो जाँच गर्न को लागी सक्षम भएको कल्पना गर्नुहोस् र अलर्ट पाउनुहोस् जब यो यसको समाप्ति मिति नजिक आउँछ, तपाइँको रोबोट भ्याकुम क्लीनर सक्रिय गर्नुहोस्, वाशिंग मेशिन खोल्नुहोस्, एक पाठ सन्देश पठाउनुहोस्, डिनर आरक्षण गर्नुहोस् र Spotify मा अर्को गीत छान्नुहोस्। । केवल तपाइँको घर को भर्चुअल सहायक र सबै एक बटन थिचे बिना बोल्दै।
यदि त्यो पर्याप्त छैन, २०२१ ले अमेजन, एप्पल, र गुगलको प्रोजेक्ट कनेक्टेड होम को प्रक्षेपण देख्नेछन्। यो विचार एक एकीकृत खुला स्रोत स्मार्ट घर प्लेटफर्म सिर्जना गर्न को लागी हो, यसको मतलब यो हो कि प्रत्येक कम्पनी को भर्चुअल सहायक कुनै नयाँ स्मार्ट घर उपकरण संग संगत हुनेछ।
ब्लुटुथ स्पीकर शावरहेड्स। स्मार्ट demisters संग मूड-जलाइएको दर्पण। यी राम्रो सानो स्मार्ट घर प्रवृत्तिहरु हो कि बाथरूम एक पायदान वा दुई अनुभव लिन्छन्। तर स्मार्ट बाथरूम को प्रतिभा अनुकूलन मा छ।
तपाइँको बाथरूम को अनुभव को हरेक विस्तार लाई नियन्त्रण गर्न को लागी सक्षम भएको कल्पना गर्नुहोस्, तपाइँको दैनिक स्नान को सटीक तापमान बाट तपाइँको आइतवार को स्नान को गहिराई सम्म। अझ राम्रो, परिवार को प्रत्येक सदस्य आफ्नो सेटिंग्स हुन सक्छ कल्पना गर्नुहोस्। डिजिटल शावर र बाथ फिलर यो एक वास्तविकता बनाइरहेको छ, र २०२१ मा सबैभन्दा ठूलो स्मार्ट घर प्रवृत्ति मध्ये एक हुन को लागी सेट गरीएको छ। कोहलर केहि अविश्वसनीय सामान उत्पादन गर्दैछ - स्मार्ट बाथ र डिजिटल शावर बाट अनुकूलन शौचालय सीटहरु सम्म।
स्मार्ट होम हेल्थकेयर
स्वास्थ्य हाम्रो दिमाग को अग्रणी मा छ, विशेष गरी समय मा यो पल मा। फ्रिजहरु कि तपाइँ को लागी तपाइँको शपिंग सूची लेख्न र सही तापमान मा नुहाउने स्नान महान छन्। तर यदि स्मार्ट घरहरु हाम्रो जीवन मा सुधार गर्न जाँदैछन्, उनीहरु लाई हाम्रो जीवन को सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्षहरु लाई पूरा गर्न को लागी आवश्यक छ। र स्वास्थ्य भन्दा बढी महत्त्वपूर्ण के छ?
सबैले स्मार्ट घर स्वास्थ्य सेवा को अगली पीढी को प्रवृत्ति बाट लाभ उठाउन सक्छन्, निद्रा र पोषण निगरानी मात्र शुरुवात संग। टेक को रूप मा उन्नत छ, आत्म-हेरचाह को लागी एक अधिक सूक्ष्म दृष्टिकोण सम्भव भएको छ।
२०२१ मा, स्मार्टवाच, स्मार्ट चश्मा, स्मार्ट कपडा, र स्मार्ट प्याच को माध्यम बाट, तपाइँको घर तपाइँको स्वास्थ्य लाई पहिले जस्तै कहिल्यै निगरानी गर्न सक्षम हुनेछ। उदाहरण को लागी, स्मार्ट सेन्सर एम्बेडेड कपडा कार्डियक र श्वसन स्वास्थ्य को निगरानी गर्न को लागी डाटा प्रदान गर्न सक्छ, साथ साथै निद्रा पैटर्न र सामान्य शारीरिक गतिशीलता।
यी स्मार्ट उपकरणहरु लाई पनि यो डाटा लिन को लागी र तपाइँको मानसिक र शारीरिक भलाई मा सुधार गर्न को लागी तरीकाहरु सुझाव दिईन्छ, साथ साथै रिमोट बिरामी एक वास्तविकता निगरानी बनाउन को लागी सक्षम हुनेछ।
स्मार्ट घर जिम
हामी मध्ये धेरै जसो महामारी को कारण बितेका महिनाहरुमा घर मा धेरै समय बिताउने संगै, स्मार्ट होम जिम क्रान्ति सही समयमा आउँछ।
विशाल टचस्क्रिन डिस्प्ले को रूप मा आउँदैछ - अर्को बर्ष ५० इन्च (१२7 सेन्टीमिटर) सम्मको स्क्रीन देखीनेछ - स्मार्ट होम जिम अब एक पूरै जिम र व्यक्तिगत प्रशिक्षक, सबै एक फिर्ता लिन सकिने प्याकेज मा छन्।
भर्चुअल व्यक्तिगत प्रशिक्षकहरु, माग मा फिटनेस कक्षाहरु र पूर्ण अनुकूलन योग्य कार्यक्रमहरु लाई पछिल्लो केहि बर्षहरु को लागी मानक भएको छ। अब, फिटनेस उपकरणहरु साँच्चै स्मार्ट बनिरहेका छन्, हरेक कसरत को जटिलताहरु लाई निगरानी गर्ने क्षमता संग। सेन्सर प्रत्येक प्रतिनिधि निगरानी, ​​मार्गदर्शन अनुकूलन र वास्तविक समयमा तपाइँको प्रगति मापन। उनीहरु पनी पत्ता लगाउन सक्दछन् जब तपाइँ संघर्ष गर्दै हुनुहुन्छ - एक 'भर्चुअल स्पटर' को रूप मा अभिनय गर्न को लागी तपाइँ तपाइँको सेट को अन्त्य सम्म पुग्न मद्दत गर्नुहोस्। अर्को स्तर विद्युत चुम्बकीय टेक्नोलोजी मतलब छ कि तपाइँ एक बटन को झटका मा वजन प्रतिरोध परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ, वा एक आवाज शीघ्र को माध्यम बाट।
स्मार्ट जिम कम्पनी Tonal स्मार्ट जिम मा दुनिया को नेता हो, Volava स्मार्ट घर फिटनेस दृश्य मा तरंगहरु बनाउन संग। यो वर्तमान जलवायु मा, र बढ्दो स्मार्ट एआई संचालित टेक्नोलोजी संग, स्मार्ट घर जिम शक्ति बाट बल मा जान जारी छ।
घरमा स्मार्ट घर उपकरणहरु को बढ्दो संख्या संग, घर मा एक वाईफाई पोइन्ट भएको अब राम्रो छैन। अब, एक घर को लागी साँच्चै 'स्मार्ट' र एक साथ धेरै उपकरणहरु चलाउन को लागी, व्यापक कवरेज आवश्यक छ। जाल वाइफाइ सम्मिलित गर्नुहोस् - एक अभिनव टेक्नोलोजी जुन, जबकि बिल्कुल नयाँ छैन, यसको आफ्नै मा आउँछ स्मार्ट घर उपकरणहरु बढ्दो लोकप्रिय बन्ने छ। मेष वाइफाइ टेक्नोलोजी एक मानक राउटर भन्दा धेरै होशियार छ, एआई को उपयोग गरी घर भर लगातार गति प्रदान गर्न को लागी।
२०२१ वाइफाइ को लागी एक ठूलो बर्ष हुनेछ, अर्को पुस्ता को टेक्नोलोजी को एक सम्पूर्ण लहर को साथ एक छिटो, कुशल, पुरा तरिकाले काम गरीरहेको छ, र एक आपसमा जोडिएको स्मार्ट घर एक वास्तविकता। Linksys, Netgear, र Ubiquiti सबै अविश्वसनीय जाल वाइफाइ उपकरणहरु कि नयाँ उचाइहरु लाई यो टेक्नोलोजी लिईरहेका छन्।
स्मार्ट घरहरु बस चलाख भयो
हाम्रो घरहरु अब हाम्रो टाउको मा एक साधारण छत भन्दा धेरै धेरै छन्। २०२१ को लागी कुञ्जी स्मार्ट घर प्रवृत्तिहरु मात्र देखाउँछन् कि कसरी एकीकृत हाम्रो घरहरु हाम्रो दैनिक जीवन मा बनिरहेका छन्। उनीहरु हाम्रो किनमेल सूची लेख्छन्, हामीलाई खाना पकाउने र खाना पकाउन मद्दत, र हामीलाई एक तनावपूर्ण दिन पछि आराम गर्न को लागी सक्षम पार्नुहोस्। उनीहरु हामीलाई सुरक्षित र स्वस्थ राख्छन् र उनीहरु हाम्रो शरीर को निगरानी गर्न को लागी हामीलाई स्वस्थ राख्न को लागी। र, यस्तो छिटो दर मा टेक्नोलोजी को प्रगति संग, उनीहरु मात्र होशियार हुँदैछन्।
TechBuddy बाट चयन गरियो
पोस्ट समय: मार्च 01-2021